Akara: Nchekwa Data na Igbe! | Martech Zone
Akara: Nchekwa Data na Igbe!
Tuesday, October 20, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nke a nwere ike ịbụ ntakịrị nke geeky, techy, post mana naanị m ga-eso gị kerịta ya. Otu n'ime ebumnuche nke Martech Zone na-enye ndi mmadu ozi banyere teknụzụ yana ahia - yabụ ị ga-ahụ ụfọdụ ederede dị mma na teknụzụ na ngwakọta site n'oge ruo n'oge.
Ọ bụrụ na ọkwa a amalite ịgụ dị ka Klingon, nyefee ya na CIO gị. Ama m na ọ ga-amasị ya!
N'ehihie a, enwere m obi ụtọ iso nzukọ ọmụmụ ihe Ọnụ ọgụgụ kọmputa, nke Doug Theis kwadoro na Datalọ Ọrụ Data Ndụ. Achọrọ m ịmụtakwu banyere Scale Computing mgbe m gụrụ akụkọ na afọ gara aga na ha natara $ 2 nde site na 21st Century Fund.
E nwere ụfọdụ ndị na-atamu ntamu na ụlọ ọrụ ahụ mgbe Scale meriri… ebe ọ bụ na ọtụtụ nnukwu mmalite agbanyela ma ụfọdụ ezigbo ndị na-atụ egwu emeela ya site na ego 21. N'aka ozo abughi teknụzụ in Indiana… ha na-akwagharị ebe a. Nke ahụ bụ ozi ọma - na obi abụọ adịghị ya na Ọkara ga-erite uru site na ụtụ isi dị ala, ngalaba teknụzụ siri ike yana ụgwọ ọrụ ọnụ na Indiana.
Nke ahụ kwuru, ọ bụ ngwaahịa na-adọrọ adọrọ nke Scale mepụtara. Afọ 20 gara aga, ejiri m sava OS2 na sava ejighi oru na RAID disk arrays. Iji hụ na sistemụ ahụ na-adị elu mgbe niile, ọ bụ usoro iwu kwa ụbọchị nke nyocha na ntụgharị draịva, iwughachi draịva, yana ịnwe akụrụngwa 'ọkụ ọkụ' dị njikere. Ọ bụ nro - ma juputara na otu isi ọdịda nke bụ nsogbu mgbe niile.
Ọgụgụ isi nke nwere ọgụgụ isi (ICS) nke Scale Computing mara ezigbo mma.
Dị ka Bryan Avdyli nke Scale kwuru, “Nchekwa abụbeghị 'sexy' ogologo oge!”. Ngwakọta Scale emepụtala ngwaike nke na-anọchi ọtụtụ ihe dị na etiti data. Dịka taa, nchịkọta ụyọkọ na-eji ọnụ njikwa na arụ ọrụ arụ ọrụ. Nke a na-ewebata otu isi nke ọdịda ma ghara ikwe ka enwee ezi arụmọrụ arụmọrụ ma ọ bụ nnweta ụwa niile. Mgbe afọ iri gachara, ọtụtụ nhazi ka na-eji mmekọrịta ohu ohu ma nwekwaa ya. Nke a emeela ka ọnụahịa nke nchekwa echekwara managed yana ụlọ ọrụ na-achọ ya enweghị ike ị nweta nnukwu nchekwa nchekwa.
Ọnụ ọgụgụ were teknụzụ IBM dị mgbagwoju anya wee weda ya n'otu igwe. Akara bụ ọgụgụ isi ọgụgụ isi nghazi nke ọ bụla nwere ike ịnweta ọnụ, nke ọ bụla na-arụkwa otu igwe. Ọ bụrụ na otu ọnụ ma ọ bụ draịva adaghị, onye na-ebido ihe na-akpaghị aka gafee ọnụ ọzọ. Scalability dị mfe ma bụrụ nke na-enweghị njedebe. Ngwọta nchekwa nchekwa dị ala nwere ike ịbụ SAN / NAS, snapshot, ọkọnọ dị mkpa, wdg. Usoro a nwere ike iru 2,200TB (ma gafee) ma nwee ike itinye ya maka nchekwa data mpaghara ma ọ bụ nke dịpụrụ adịpụ. iSCSI & VMWare iSCSI Multipathing na-wuru na nkwado maka iSCSI, CIFS, na NFS ogbugba ndu.
Na Bekee, nke a pụtara na ụlọ ọrụ gị nwere ike ịzụta azịza 3TB maka ihe dị ka $ 12k ma gbanye ya n'ụzọ bụ isi. Ọrụ gị dị ugbu a nwere ike ịnọgide na-agba ọsọ ma kwaga data - ọbụlagodi ka ị na-agbasa ikike gị, na-egbutu oge nhazi site na 75%. Ka ị na-agbasawanye usoro ahụ ịkwesighi ịgbakwunye ikikere ndị ọzọ.
Teknụzụ mara mma dị egwu nke nwere ike ịgbanwe ụgwọ na scalability nke ụlọ ọrụ nchekwa data. Aga m ekweta na enyemaka $ 2 site na ego 21 nwere ike bụrụ nnukwu mkpebi maka ụlọ ọrụ a. My naanị nchegbu bụ otú anya ha ga-zụtara elu site na nnukwu ụlọ ọrụ… Olileanya mgbe ha kwagara ebe a na-eme ka akụ na ụba mmetụta!
Tags: iguzosi ikeire ahiaagụ anyaelekọta mmadụ mgbasa ozi crmnhazi usoro mgbasa oziusoro mgbasa ozimmekọrịta mmadụ na ibe ya
A tọhapụrụ Ndị A Na-eji Ahịa Media Ọhụrụ
Pịa 1 Ọ bụrụ n’inwee ego
Ọkt 21, 2009 na 3:50 PM
Hey Douglas, enwere m olileanya na ị ga-esonyere m maka egwu, ihe ọ drinksụ drinksụ, wi-fi + nerd-speak
na ndị na-ede blọgụ na-amaghị aha Tọzdee, Ọkt 22, 5-7PM na Indianapolis Museum of Art
RSVP ma nweta ihe omuma ebe a: http://www.facebook.com/event.php?eid=15997455071...